Lixabiso Custom sheet laser ukusika iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Inkqubo yesinyithi ebandakanya ukusika i-laser, ethi isebenzise ikakhulu i-lasers ephezulu yokusebenza ukukrola nokusika izinto. Iimveliso zeshidi zephepha zinempawu zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukuqhuba kombane, iindleko eziphantsi kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso. Banoluhlu olubanzi lokusetyenziswa.
Iphepha lesinyithi elenzelwe ukusika iinxalenye-ezichanekileyo zetsimbi yokusika i-laser ukusika iindawo zoomatshini
Ukwenziwa kusetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo ze-elektroniki, unxibelelwano, ishishini leemoto, izixhobo zonyango kunye nezinye iinkalo. Umzekelo, kwiimeko zekhompyuter, iifowuni eziphathwayo, kunye neMP3, isinyithi siyinxalenye ebaluleke kakhulu. Ukongeza, isetyenziselwa ukuvelisa izixhobo zonyango, kunye nemoto kunye nelori (iilori) imizimba, ii-fuselages zenqwelo moya kunye namaphiko, iitafile zonyango, uphahla lokwakha (ulwakhiwo) kunye nezinye izinto ezininzi ezenziwayo.
Egqithileyo Sheet iindawo metal ukusika
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu we-OEM wentsimbi ye-laser cut cut